टुट्याे हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया, के हो विवाद ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
टुट्याे हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया, के हो विवाद ?
काठमाडौँ — हिमालयन बैंकको साधारणसभाले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरको विशेष प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न बैंकको २९औं वार्षिक साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो । मर्जर विषयमा सेयरधनीहरुबीच विवाद भएपछि उक्त प्रस्ताव पारित हुन नसकेको हो ।
मर्जर सम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति हुन नसकेपछि बैंकले मतदानमार्फत पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार शुक्रबार मतदान भएको हो । मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न ७५ प्रतिशत सेयरधनीले स्वीकृत जनाउनुपर्ने थियाे । तर कर्मचारी संचयकोष, एन ट्रेडिङ कम्पनी, छायाँ इन्टरनेशनललगायत कम्पनीसहितले असहमति जनाएपछि ४२ प्रतिशत मत विपक्षमा आएको स्राेतले जनाएको छ ।
हिमालयन बैंकमा संचय कोषको १४.८७ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यस्तै, एन ट्रेडिङ कम्पनीको १२.७७ प्रतिशत र छायाँ इन्टरनेसनलको ८.९४ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । यसरी ३६.५८ प्रतिशत सेयरधनीको असहमतिपछि हिमालयन बैंकको साधारणसभाबाट मर्जरको प्रस्ताव पारित हुन नसकेको हो ।
हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हबिब बैंकको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ । यो बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी हो । दोस्रो ठूलो सेयरधनी कर्मचारी सञ्चय कोष हो । बैंकमा कोषको १४.८७ प्रतिशत सेयर छ । यस्तै, एन ट्रेडिङ कम्पनीको १२.७७ प्रतिशत, म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको ११.८५ प्रतिशत, आभा इन्टरनेसनलको ११.३८ प्रतिशत र छायाँ इन्टरनेसनलको ८.९४ प्रतिशत सेयर छ । शशिकान्त अग्रवालको २.६५ प्रतिशत, अन्जु खेतानको ०.७७ र शर्मा एण्ड कम्पनीको ०.६६ प्रतिशत सेयर लगानी छ । बाँकी सेयर सर्वसाधारण र साना लगानीकर्ताको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर सम्झौता गरेदेखि नै हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिमा मतभेद देखिएको थियो । संस्थापक लगानीकर्ताहरु हबिब बैंक, म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी, आभा इन्टरनेसनल र खेतान समूह मर्जरको पक्षमा रहेका थिए भने संचय कोष, एन ट्रेडिङ कम्पनी र छायाँ इन्टरनेसनल विपक्षमा रहँदै आएका थिए । यही कारण समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको करिब ९ महिना पछि यी दुबै बैंकको मर्जर प्रक्रिया रद्द हुने भएको हो ।
दुबै बैंकले गरेको सम्पत्ति तथा दायीत्व मूल्यांकन (डीडीए)मा कर्मचारी संचय कोष लगायत करिब ३६ प्रतिशत सेयरधनीहरुको चित्त बुझेको थिएन । दुबै बैंकको डीडीए अनुसार हिमालयन बैंकको एक कित्ता सेयर बराबर इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पनि एक कित्ता सेयर हुने भन्ने छ । त्यो मूल्यांकनमा हिमालयन बैंकको सम्पत्तिको कम मूल्यांकन गरिएको र इन्भेष्टमेन्टको बढी गरिएको भन्दै कोष लगायत सेयरधनीले विरोध गर्दै आएका थिए । यसकारण आजको साधारण सभामा उनीहरुले मर्जरको विपक्षमा मतदान उभिएका हुन् ।
यस्तै, कोषले स्वतन्त्र विज्ञद्धारा गरेको अध्ययनमा हिमालयन बैंकको १ कित्ता सेयर बराबर इन्भेष्टमेन्टको ०.७८ कित्ता सेयर हुने भन्ने छ । यो प्रस्ताव सम्बोधन नभएसम्म कोषले मर्जरमा सहमति नजनाउने विषयमा संचय कोषको संञ्चालक समितिले औपचारिक रुपमा निर्णय नै गरेको छ । बैंकहरुले गरेको डीडीएको सुझाब अनुसार मर्जरमा जाादा हिमालय बैंकका सेयरधनीले प्रतिसेयर ४७ रुपैयाा २२ पैसा नोक्सान बेहोनु पर्ने कोषको अध्ययनले देखाएको छ ।
हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका केही व्यक्तिको इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पनि ठूलो सेयर लगानी छ । केहीको पारिवारीक सम्बन्ध छ । यसकारण ती समूह जसरी भएपनि मर्जरमा जाने पक्षमा छन् ।
प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ १४:२३
धनकुटामा टिपर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु
पुस ३०, २०७८ रमेशचन्द्र अधिकारी
धनकुटा — कोसी राजमार्ग अन्तर्गत धनकुटा–२ नागढुंगामा शुक्रबार बिहान टिपर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
बा प्र ०३–००१ क ०५४९ नम्बरको टिपर सडकबाट अन्दाजी २५ मिटर तल झर्दा टिपर चालक र सहचालकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा परेर प्यूठानको मान्डवी गाउँपालिका वडा नं. १ का टिपर चालक २८ वर्षीय भुवन थ्रेडी मगर र दाङको बबई गाउँपालिका वडा नं ३ का २१ वर्षीय नवीन विकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी नहकुल पोखरेलले जानकारी दिए ।
दुर्घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले दुवै जनाको सव गाडीमुनि च्यापिएको अवस्थामा फेला पारेको एसपी पोखरेलले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ १४:१६
ट्रेकिङ तथा टुर व्यवसायीलाई करका मुद्दा फिर्ता लिन २ महिना समय थप
शुक्रबारसम्म सिटामोलको आपूर्ति सहज गराइने
२९ सयमुनि ओर्लियो नेप्से, सबै उपसमूह घटे
डेरावालसँग विद्युत् महसुल बढी असुलेमा लाइन काटिने
अब घरमै चार्जिङ स्टेसन राख्न पाइने, के छ मापदण्ड ?